Wasiir Bayle been ma sheegin, runna ma sheegin !. – Somali Top News
Dakhligii Dowlada ay filanaysey in gudaha ka soo xaroodo ee ahaa $156 malyan ma soo xaroodey?.
Dakhligii laga filayey Deeq bixiyaasha ee ahayd $118 malyan ma laga helay ?.
Miisaaniyaddii 2018-kii ee $274 malyan ma la wada helay sidii Qorshaha ahaa ee Baarlamaanka u ansixiyey ma loo qarash gareeyey?. Haddii wax isbedel ah jiraan la wadaag shacabka. Waa in ay daahfurnaan ay jirtaa.
Lacagta Sacuudiga ($50malyan)ee Kaydka ahayd oo ay xukuumadu ka isticmaashey $35 malyan maxaa keeney in la isticmaalo?. Maxaa lagu baxshey qarashkaa?. Guddiga Maaliyada ee Golaha Shacabka ma lala wadaagey?.
← Al shabaab killed 10 Somali soldiers in attack
Ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM oo bilaabaya duulaan ka dhan ah Al shabaab →